Imveliso yoKhuseleko, uNcedo lwezoNyango, iKhithi yoNcedo lokuQala- Zonyango lwasendle
Ezilahlwayo Izixhobo zoNyango Isisombululo
Amava eMveliso yezoNyango
AmaQela athembekileyo amaQela
Sinolwazi kwaye sinamava
Sikwimveliso yezonyango ngaphezulu kweminyaka eyi-10 kwaye besixhasa abathengi bethu nangaphambi kokuvula ishishini lethu. Ngembali ende, abathengi bethu banokuphumla ngokulula besazi ukuba baneqabane elaziyo iimveliso zabo ngeyona nkcukacha incinci. Nokuba iimfuno zakho zilula okanye zinzima, amathuba liqela lethu sele liyibonile into efanayo kwaye uyazi ngqo ukuba kuthatha ntoni ukwenza ukuba ukuthengwa kwakho kube lula.
Sinobungcali obunzulu beShishini
Ngelixa singalusebenzisa ulwazi esilufumene kumashumi eminyaka adlulileyo kwishishini lezonyango, bambalwa esiye sasebenza ngaphezulu kunabanye. Oku kubandakanya iinkonzo zobungcali, ukuvelisa, ukuhambisa, ukubhaliswa kunye nokubhaliswa kwezonyango.
Singaphezulu kokubonelela, singamaqabane akho eshishini
Omnye wemigaqo yethu ekhokelayo kukuxabisa ubudlelwane. Asisebenzi nje nzima ukuphumelela intengiso, kodwa sisebenza nzima ukufumana ishishini labathengi bethu yonke imihla. Siyaqonda ukuba xa abathengi bethu bekhetha kuthi, basinika into ebaluleke kakhulu kwishishini labo, ulwazi lwabo kuthi. Ungathembela kuthi malunga nokujika okukhawulezayo, izimvo ezintsha kunye nenkonzo ephezulu yokuziva ngathi singabasebenzi bakho, hayi umthengisi.
NgoJuni 03, 2021
Zimbini iintlobo zovavanyo xa kuziwa ukukhangela i-COVID-19: iimvavanyo zentsholongwane, ezijonga usulelo lwangoku, kunye novavanyo lwe-antibody, oluchaza ukuba amajoni akho omzimba akha impendulo kusulelo lwangaphambili. Ke, ukwazi ukuba wosulelwe yintsholongwane, oko kuthetha ukuba unoku ...
Amavili aqandisisiweyo adibanisa njengoMthombo ophambili weigloves zeNitrile ezivunyiweyo ze-FDA eMelika
Iivili eziFrozen, umhambisi ophambili wokutya kunye nePPE, ibhengeza ukuvulwa kweofisi eThailand ukuphendula kwimfuno ekhulayo yeigloves zovavanyo lwe-nitrile engenampuphu. “Ubhubhane we-COVID-19 ubangele umngeni kumaziko ezempilo ukufumana iigloves ezisemgangathweni nge-FDA ap ...
ICarlifonia ifuna ukugqunywa ngobuso kuninzi lwezinto ezingaphandle kwekhaya
ISebe laseCalifornia lezeMpilo yoLuntu likhuphe isikhokelo esihlaziyiweyo esigunyazisa ukusetyenziswa kwamalaphu okugquma ubuso ngurhulumente kwilizwe lonke xa kungaphandle kwekhaya, ngaphandle kokulinganiselwa. Njengoko isebenza kwindawo yokusebenzela, abantu baseCalifornia kufuneka banxibe ubuso xa: 1.babandakanyeka emsebenzini, nokuba ...